Faneva Raholdina Mendrika alain-tahaka ny fotokevitr�Atoa Donald Trump
Tokony hiainan�ny mpanao politika malagasy mieritreritra ny hitondra sy ireo efa mitondra ankehitriny, hoy Atoa Faneva Raholdina mpandalina politika, ny fotokevitr�Atoa Donald Trump.
« Ny Amerikanina aloha vao ny hafa », hoy izy. Nanohina ny fon’ny vahoaka amerikanina ary nankatoavin’izy ireo ilay fokokevitra matoa marobe izy ireo no tonga nifidy ary nahalany ity kandidàn’ny Repoblikanina ity. Ilaina hita taratra ara-piarahamonina sy ara-tsosialy anefa ilay hevitra. Eo amin’ny resaka fandraharahana dia mazava ny hevitr’Ingahy Trump fa tsy maintsy ny mpandraharaha amerikanina aloha no homen-danja vao mijery ireo mpandraharaha vahiny. Ohatra akaiky amin’izany ny tokony hijeren’ny eto amintsika ny orinasa Malagasy TIKO akaiky aloha vao manome lanja an’ireo orinasa vahiny mitovy lenta aminy. Eo amin’ny sehatry ny fanomezana tanim-panjakana dia tokony hisitraka aloha ny teratany Malagasy tompontany ary hahazo fiarovana vao mijery ireny mpandraharaha sinoa sy vahiny hafa ireny ny fitondram-panjakana Malagasy. Raha izay no tanteraka dia azo antoka ny hahafahan’ny mpitondra mamita “mandat” roa farafaharatsiny, hoy i Faneva Raholdina. Efa nanao ity fihetsika ity ny filohan’ny TIM, Marc Ravalomanana, tamin’ny taona 2002 raha nitondra ny teny filamatra : “ ‘Ndeha hiara-dia, ny mandroso no tanjona”. Be dia be ny Malagasy resy lahatra tamin’izany ka tonga nandatsa-bato ary dia lany ho filoham-pirenena ny lehilahy. Zava-nisy ireny ka sarotra adinoina fa tsy hoe fanindraindrana olona fotsiny.